Maxay yihiin ciidamada Haramacad ee dagaalka Guriceel ka qeybgalaya? | Xaysimo
Home War Maxay yihiin ciidamada Haramacad ee dagaalka Guriceel ka qeybgalaya?
Weli waxaa magaalada Guriceel laga maqlayaa hub culus oo ka dhacaya dhanka Waqooyiga magaalada Guriceel, halkaas oo uu ku yaallo saldhigga ugu wayn ee ciidanka ururka Ahlu Sunnah.
Boqollaal qof ayaa ka qaxay magaalada, waxaana dagaalka ku dhintay dad badan oo isugu jira rayid iyo labada dhinac ee dagaallamaya, sida BBC Somali ay u sheegeen dad goobjoogeyaal ah.
Sidoo kale, waxaa la sheegayaa in illaa 30 qof ay ku dhinteen dagaalka seddaxda maalmood ka socda magaalada Guriceel ee u dhexeeya Galmudug oo garab ka heleysa dowladda iyo malleeshiyaadka ururka Ahlu Sunnah.
Dowladda Soomaaliya ayaa Guriceel isugu geysay noocyo kala duwan oo ciidan ah, sida Xoogga Dalka, Danab iyo Haramacad iyo kuwa kale.
Qoraalka sawirka,askari katirsan ciidanka Haramacad
Qoraalka sawirka,Ciidanka Haramacad waxaa tababaray
Qoraalka sawirka,Ciidanka Haramacad oo ku sugan Galmudug
Qoraalka sawirka,Taliyaha ciidanka Haramacad, Farxan Maxamuud Qaroole